SKT International College will be closed effective on 18th March, 2020 to 30th April 2020 - SKT International College
March 17, 2020 SKT International College
📌Dear Parent and Guardians,
Following the Ministry of Education statement, SKT International College will be closed effective on 18th March, 2020 to 30th April 2020. Our teachers will be engaged in professional learning from 18th March, 2020 to 20th March 2020. During this time there will not be any physical or virtual classes for students.
မွနျမာနိုငျငံပညာရေးဝနျကွီးဌာန၏ ကွငွောခကျြ အရ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား၏ ဘေးကငျးလုံခွုံရေးကို ရှေးရှုသောအားဖွငျ့ SKT International College အား မတျလ (၁၈) ရကျနမှေ့ ဧပွီလ (၃၀) ရကျနအေ့ထိ ခတ်ေတယာယီပိတျထားမညျဖွဈပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့၏ ဆရာ/ဆရာမမြားသညျ မတျလ (၁၈) ရကျနမှေ့ မတျလ (၂၀) ရကျနအေ့ထိ သငျကွားမှုမွှငျ့တငျရေးအစီအစဉျမြားအား ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပါသောကွောငျ့ ၎င်းငျးရကျမြားအတှငျး ကြောငျးသားကြောငျးသူမြားအတှကျ အတနျးခြိနျမြား၊ Online သငျကွားခွငျးအစီအစဉျမြား ရှိမညျမဟုတျပါ။
မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြေငြာချက် အရ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ရှေးရှုသောအားဖြင့် SKT International College အား မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့မှ ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့အထိ ခေတ္တယာယီပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာ/ဆရာမများသည် မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့မှ မတ်လ (၂၀) ရက်နေ့အထိ သင်ကြားမှုမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များအား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ၄င်းရက်များအတွင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အတန်းချိန်များ၊ Online သင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်များ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။